aungthapyae9: February 2013
အစွန်းရောက်မူဆလင်၊ အစွန်းမရောက်တရောက် မူဆလင်၊ အစွန်းရောက်ချင်နေသောမူဆလင်၊ အစွန်းရောက်ခါနီးနေသော မူဆလင်
နိုင်ငံတိုင်းက မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ မရိုးနိုင်သော taqiyya ဖြီးလုံးများ
မူဆလင် ၁ယောက်၊ မယား ၄ယောက် ၊ မူဆလင် သားဖေါက်စနစ်
အစ္စလာမ်မစ်တွေကို ခါးပိုက် မပိုက်ပါနဲ့၊ Trojan ကို သတိရပါ
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကျမှ ဆောက်လိုက်သော ဆူးလေဗလီ
အင်ဒိုနီးရှား ကို နမူနာယူပါ
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည်
— with Bamar Blood, Khin Kyi Thar, George David Stanley, ကမ္ဘာဂြိုလ်နှင့် အနီးဆုံးဂူဗိမာန်, ဥုးကောသ လ္လ, အမျိုးဖျက်ကြံ့ဖွတ်ပါတီအား မတရားအသင်းကြော်ငြာရေး, Yin Ko, Han Nyein San, အသောက အသောက အသောက, Kim Sai, အနောက်တံခါး ဘီလူး, Wailinn Kira, Phay Sit Gyi, Rap Boy King, G Tone Mmhu, Ko Aung, Zeyar Soe Win, မျိုးချစ် သမီး, Black Angle, ဒီမို ပါပါကြီး, Demon's Curse, Kochan Tha, လူငယ်လေး တစ်ယောက်, Andrew Naing, ပုဂံပြည် မှ သူရဲကောင်း, Hsu Ydn, Ashin Kusalasami, Ko Lynn, အနောက်ရိုးမမှဝိညာဉ်များ ပူးကပ်စီးဝင်နေသော မျိုးချစ်လူငယ်တစ်ယောက်, Arakan Than Koe Maung, ဦး ယဉ်ကျေး, Thu Ri Ya, Wira Thu, သခင် ယာပိုလို, Bo Thu, James Mint, Aung Sithu, Lin Luck Lu, Nyi Gyi, Su Htet, Ko Pauk, Chit Tay Ayesoe, ဦး ဘခက်, မျက်လုံး တစ္ဆေ and သစ် ပင်.
စစ်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို သိမ်းတဲ့ ခေတ် ထက်..
ခုခေတ်လို .. မွတ်စလင်မ်တွေ တစိမ့်စိမ့်ဝင်ရောက် အင်အားများလာပြီး သိမ်းပိုက်တာ က.. ပိုပြီး အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လည်း .. ဥရောပနိုင်ငံတွေ က သက်သေပါပဲ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ယိုအင်ဂျာ မွတ်စလင်မ် တွေ က .. ရခိုင် အခန်းကဏ္ဍ
မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်စလင်မ်ညီအစ်ကိုတော်များ က .. မြန်မာပြည်အခန်းကဏ္ဍ မှာ တာဝန်ကျေဖို့
ထိုင်းတောင်ပိုင်းမွတ်စလင်မ်တွေ က .. ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ တာဝန်ကျေပွန်ဖို့
မွတ်စလင်မ်ညီအစ်တော်တွေရဲ့ ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ အလိုက်ပေါ့...
မွတ်စလင်မ်တွေ ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ အောက်ကလင့်ခ်ထဲ ကပုံအတိုင်းပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာ ရခိုင် ၊ ရန်ကုန်၊ဧရာဝတီ၊ ကရင်၊ မွန်၊ တနင်္သာရီမှာ မွတ်ဆလင်မ်တွေ များလာသလားပေါ့။
ဒါကို ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်။
အကုန်ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံကြီးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် .. သီးသန့် အစ္စလာမ်မစ် နယ်မြေလေးတွေ ကိုယ်စီပေါ့။
ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း မူလဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဘာသာတရားတွေ က တော့ ...
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန် ညွှန်ကြားချက်အရ တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ မွတ်စလင်တွေ ချေမှုန်းဖျက်ဆီးလာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ နောက်ဆုံးသောခံတပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ .. မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ ပဲ ကျန်တော့တာဆိုတော့
Aung Myo Thu >>> " ရခိုင်ပြည်မှာလည်း ရခိုင်မင်းဆက် နောက်ဆုံး မဟာသမတရာဇာ ၁၇၈၄ ခု ( ဗမာဘုရင် မောင်ဝိုင်းခောတ်၊ စစ်ကိုင်းမင်းခောတ် ထပ်တိုး နှစ်ပေါင်း ၄၀ ) ၁၈၂၄ အထိ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲဘူး။ ဗလီဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခောတ်မှာ ခေါ်တောတွေ စဆောက်ကြတာ " အဲဒီအချက် က အမှန်ဆိုရင် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
အနည်းဆုံး ဘယ်မြို့နယ် ( ဥပမာ မြောက်ဦး စစ်တွေ ) စသည်တို့မှာ ဘယ်နှစ်ခုနှစ် အထိ ဗလီ တစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို သေချာလေ့လာတင်ပြပေးစေလို့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးမှ မြန်မာဘုရင်တွေခေတ် က ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲ့တဲ့ အချက်ရယ်၊
ဆူးလေစေတီတော်မြေနေရာကို ကိုလိုနီခေတ်မှာ မွတ်စလင်မ်တွေ က အခွင့်ကောင်းယူပြီး ( ဗုဒ္ဓဘာသာကို နာမ်နှိမ်ထားတဲ့သဘော) ဆူးလေစေတီတော်ကြီး မြေနေရာ ကို ယူပြီး ဘင်္ဂလီဆွန်နီဂျာမေ့လ် ဗလီကြီး ဟီးနေအောင် ဆောက်ထားတဲ့ အချက်တွေဟာ ... အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေပါ။
သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရပါဘူး။ ....
သမိုင်းကို လူငယ်တွေ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းသိဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊
သို့မှသာ ဒီဗလီတွေ ဟာ ရှေးခေတ် ကတည်း ကဆောက်ထားတဲ့ ဗလီတွေ မဟုတ်ပဲ .. ကိုလိုနီခေတ်ကျမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမူဆလင်တွေ ၀င်ရောက်ကျူးကျော် အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ဆောက်ထားတာ ဆိုတဲ့ အချက်ကို မြန်မာတွေ အထူးနားလည် သဘောပေါက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသက ဗလီ တစ်ထောင်ကျော်ဆိုတာ ရခိုင်ဒေသကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ တက်သုတ်ရိုက်ပြီး ဆောက်ထားတာ ဆိုတဲ့ အချက်ကို .. အနည်းဆုံး ဘယ်မြို့နယ် ( ဥပမာ မြောက်ဦး စစ်တွေ ) စသည်တို့မှာ ဘယ်နှစ်ခုနှစ် အထိ ဗလီ တစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို သေချာလေ့လာတင်ပြပေးစေလို့ပါတယ်
( *** မှတ်ချက် ။ ။ အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ က.... ရဟန်းသံဃာတွေကို လည် လှီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်း ပြီး ....အစ္စလာမ် နိုင် ငံ အတွင်း သို့ သွတ်သွင်းလာခဲ့သော မွတ်ဆလင်အစ္စလမ်မစ်တွေဟာ
အခုဆိုရင် အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ ကို တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ ချေမှုန်းပြီး …… ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတို့ ကို ခြိမ်းခြောက်လာနေပါပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင် ......ဤ ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ အပြီးတိုင်အောင် ပျောက်ကွယ် သွား ပြီ လို့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတို့ကို သာ အစ္စလာမ် နိုင် ငံ ဖြစ် အောင်လုပ် နိုင် ရင် .....မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကို ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အပြီး တိုင် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆို နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေး မွေးဖွားနှုန်း နဲ့လူဦးရေတိုး ပွားပုံ အရ ဆိုရင် မြန်မာ ၊ထိုင်း၊ သီရိင်္လကာနိုင်ငံ ပါ နောင် နှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာ မွတ် ဆလင် လူဦးရေ တ၀က်ကျော် နိုင်ငံ တွေ ဖြစ် သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်တာဆီးဖို့က ခင်ဗျားတို့ ၊ ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ် နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နဲ့ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတွေကို ၀ိုက်ဖို့ မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ ဗလီဆောက်နှုန်းတွေ ကို ကြည့်ပါ။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ၁၈၂၆ မတိုင်ခင်တုန်းက ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိပါဘူး
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ မူဆလင်တွေ က ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုး၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်တစ်ခု ၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခု ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးပါသလား?
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသောခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဧ။်အချက်အချာ ကျသောနေရာများတွင် ဗလီပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသောခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဗလီပေါင်း ၃၄၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသောခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ဗလီအလုံးပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်အတွက်လား ? အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့လား ?
ဒါတွေ ဟာ ဘာကို ဦးတည်နေပါသလဲ ?
ကိုယ့်ရှေ့ က ဗုဒ္ဓဘာသာနောင်တော် နိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ .....အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန် စတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံ တွေ ဘာဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ?
ရလဒ်က ဘာဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ ?
ကောက်ကျစ်လှတဲ့ အစ္စလာမ်မစ်တွေရဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းအရ ရန်သူကို အနိုင်ယူချေမှုန်းဖို့ ( တရားဝင် ) လိမ်လည်ခွင့်ပေးထားတဲ့ Taqiyya စကားတွေမှာ မျောမနေပဲ....
လက်တွေ့( လက်တွေ့ ) ဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ဖြစ်နေဆဲ၊ အခြေအနေများဖြင့်သာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ လည်ပတ်နေပုံကို သုံးသပ်ပါ။
ကာကွယ်တာဆီးဖို့က ခင်ဗျားတို့ ၊ ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ *** )
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါ
( မြန်မာ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံး
သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိစေရန်နှင့်
တဖြည်းဖြည်း တအိအိ နဲ့ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းခြင်း ဆိုတာ ကို
နားလည်သဘောပေါက်စေရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည် )
၁၈၂၄ နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် က အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်သလိုပဲ
၁၈၂၄ နောက်ပိုင်း ကိုလိုနီခေတ် က စပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့အပြား အချက်အချာကျတဲ့ နေရာတိုင်း မှာ အစီအစဉ်တကျ ဖြန့်ကျက် ဆောက်ထားတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗလီတွေ ဟာလည်း အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်း ဖို့ ဆောက်ထားတဲ့ ဗလီတွေဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၂၄ မတိုင်မီ မြန်မာဘုရင်တွေက မွတ်ဆလင်တွေကို ဆောက်ခွင့်၊ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းဗလီများသာ မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင်များရဲ့ အမှန်အကန် ဗလီများဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၂၄ မတိုင်မီ မြန်မာဘုရင်တွေက မွတ်ဆလင်တွေကို ဆောက်ခွင့်၊ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းဗလီများသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရ ရှေးဟောင်းမြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင် အနည်းငယ်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ အမှန်အကန်ဗလီများဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၂၄ မတိုင်မီက မြန်မာပြည်မှာ၊ ရန်ကုန်မှာ ၊ မန်းလေးမှာ ဗလီဘယ်နှစ်ခုများ ရှိခဲ့မယ်ထင်ပါသလဲ။
၁၈၂၄ မတိုင်မီက မြန်မာပြည်မှာ ( ပြောပြောနေတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်စစ်စစ်) ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိခဲ့မယ်ထင်ပါသလဲ။
ဒါကြောင့် ၁၈၂၄ ကနေ ၂၀XX အထိ ဆောက်တဲ့ ဗလီများဟာ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းရန် အတွက်ဆောက်တဲ့ ဗလီတွေဖြစ်ပါတယ်။
မူလ ဆူးလေစေတီတော်ကြီး အနီးမှာ မည်သည့်ဗလီမှ မရှိခဲ့ပါ။ ပုံတွင်ကြည့်ပါ။ ရှင်းနေတာပဲ။ ဘာဗလီမှ မရှိဘူး။ ဘယ်လောက် ကြည်ညိုသပ္ပါယ်စရာကောင်းခဲ့သလဲ
ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ စတဲ့ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံများတွင် ဗလီများထောင်နဲ့ချီဆောက်ခြင်းသည်းခံပါ။
ခင်လည်းခင်တယ်။ အားလည်းနာပါတယ်။ သို့သော် ဗလီဆောက်ခြင်း သည်းခံပါ။
ဘင်္ဂါလီ ( သေချာကြည့်ပါ ရိုဟင်ဂျာ ဗလီဟု မသုံးပါ) ဆွန်နီ ဂျာမခ် ဗလီ ဟာ ဆူးလေစေတီတော်ကြီးရဲ့ မုခ်၊ ပြသာဒ် ပရ၀ဏ်၊ ဘုရားမြေ သာသနာ့မြေနေရာကို ယူပြီး ကိုလိုနီခေတ် ကာလမှာ အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ဗလီကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ က ဆူးလေဗလီဆိုတာ ပုဂံခေတ် ကတည်းက ဆောက်ခဲ့တာလို့ ဖြီး မှာစိုးလို့။
နှောင်းလူ၊ အနာဂတ်မြန်မာတွေက ဆူးလေဗလီ ဆိုတာ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တာလို့ ထင်နေမှာစိုးလို့ သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ပြတာပါ။
ငါတို့ ဆူးလေစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာ တစ်ချိန်တုန်းက ဒီလိုပါလား ဆိုတာ သိအောင်လို့ ပါ။
ငါတို့ ဘိုးဘွားတွေ ၊ မြန်မာဘုရင်တွေခေတ်တုန်းက ဆူးလေစေတီတော်ကြီးဟာ တန်ဆောင်းပြသာဒ်တွေ နဲ့ ကြည်ညိုသပ္ပါယ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။
အခု ငါတို့ခေတ်မှာ ဆူးလေစေတီတော်ကြီးရဲ့ တန်ဆောင်းပြသာဒ်နေရာတွေ မှာ ဗလီကြီးတွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ အစ္စလာမ်နယ်မြေဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။
နောင် ငါတို့ သားမြေးတွေ ခေတ်မှာ ဆူးလေစေတီတော်မြတ်ကြီး ဟာ ရှိရော ရှိပါတော့ အုန်းမလား...ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ကလေး တစ်ချက်လောက် ၀င်သွားဖို့ ပါပဲ။
ငါတို့ ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုရားမြေမှာ မို့ လို့ ဗလီကို ရွှေ့ပေးပါ။ တခြားနေရာ မှာ ဗလီဆောက်ဖို့ မြေအကျယ်ကြီး ပေးပါမယ်လို့ ပြောရင် မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လို ပြန်ဖြီး မယ်ထင်သလဲ။
ဆူးလေဘုရားမြေ၊ သာသနာ့မြေဟာ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ။ မိုဟာမက်မွေးတဲ့ နေရာလား။ ??
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူးတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ မြို့ ဂျေရုဆလင်၊
ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ Ayodhya မြို့ တွေမှာ သူများဘာသာတွေရဲ့ ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ်နေရာတွေ မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သူများဘာသာတွေကို နာမ်နှိမ်ပြီး တမင်သက်သက် ဗလီကြီးတွေ ဟီးနေအောင်ဆောက်တတ်ပါတယ်။
ဆောက်ပြီးရင် တစ်သက်လုံးဖယ်မပေးဘူး။ စိတ်ချ။
ဒါကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ဒေသ ရောက်ရောက် မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ၈၀% စောက်ကျင့်အတူတူပဲလို့ ပြောတာပါ။
ကုရန်အာန်ကျမ်းညွှန်ကြားချက် အရ သူများဘာသာခြားနေရာတွေကို နာမ်နှိမ်ထားရမယ်။ ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။
အထူးသဖြင့် ( ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူးတွေ၊ ဟိန္ဒူ စတဲ့ ) ဘာသာခြားတွေရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာ့မြေပေါ်မှာ ဗလီကြီးတွေ ဆောက်ပြီး ဘာသာခြားတွေကို တစ်သက်လုံး နာလံ မထူနိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။
ဒါတွေဟာ တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ။ ဘာအတွက် မဖယ်ပေးနိုင်တာလဲ။ ဆူးလေဗလီကို ။
မိုဟာမက်မွေးခဲ့တဲ့နေရာမို့ လို့ လား။ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးသမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ နေရာမို့ လို့ လား။
အစ္စလာမ်မစ်များကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လူသားမျိုးနွယ် အားလုံး စုစည်းညီညွတ်ခြင်း
ရှေ့နွားသွားတဲ့ နောက် ..နောက်နွားတစ်သိုက်
မွတ်ဆလင်တွေဆိုတာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒအကျဉ်းထောင်ကြီးမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေပါပဲ
ပူတဲ့လူတွေ က တော့ ပူရမှာပဲ၊ အူတဲ့ သူတွေ က တော့ အူကြမှာပဲ
ရှေ့နောက် မညီ တဲ့ မိုဟာမက် အမိန့်တွေ နဲ့ Twisted ကုရ်အာန်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို မူဆလင်တွေ က ဘာကြောင့် အသလွတ်မုန်းနေရတာလဲ
ဘာသာခြားတွေ ကို လှည့်စားဖို့ ရေးထားတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းချက်များ
မိုဟာမက် မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက် ကတည်းက အာရဗ်တွေ ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ အာရပ်ရိုးရာလခြမ်းနတ်ဘုရား အလ္လာဟ်
ရံဖန်ရံခါ မိန်းမစိတ်ပေါက်တတ်သော မိုဟာမက်
မူဆလင် ၉၉% သေချာပေါက် ငရဲကျမည် / ပုံ-မိုဟာမက်
မူဆလင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အဆင့်ဆင့်
ဒီအချိန်ဟာ မြန်မာတွေ ရဲ့ သေရေးရှင်ရေး အချိန်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွတ်မြတ်ဆုံး သာသနာ့မြေ မို့ လို့ ကို တမင်သက်သက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်သက်လုံးနာလံမထူနိုင်အောင် ဗလီကြီးဆောက် ပြီး နာမ်နှိမ်ထားတာ။
တသက်လုံး မဖယ်ပေးဘူး။ ရှင်းပါတယ်နော်။
အထူးသဖြင့် ဘာသာခြားတွေရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာ့မြေပေါ်မှာ ဗလီကြီးတွေ ဆောက်ပြီး ဘာသာခြားတွေကို တစ်သက်လုံး နာလံ မထူနိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
နှစ်တွေ ဒီလောက်တောင် ကြာခဲ့တာပဲ။ ငါတို့ ဘိုးဘွားတွေ ကိုလိုနီခေတ်က ခွင့်ပြုခဲ့တာကိုး၊ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။
ဒီလိုပဲကျနော်တို့ သားမြေးတွေ ခေတ် ကျရင် မွတ်ဆလင်တွေ မြန်မာပြည်မှာ သန်း ၆၀လောက် ရှိတဲ့ အခါ။
အဲဒီအနာဂတ် မြန်မာလူငယ်လေးတွေဟာ " အော် ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ၊
ငါတို့ ဘိုးဘွားမြန်မာတွေ ခေတ် က ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် ၆သန်းကို မြန်မာလူမျိုး အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့တာကိုး။
ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် ၆သန်းနဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်ရောက်နှင့်ပြီးသား မွတ်ဆလင် ၆သန်း စုစုပေါင်း ၁၂သန်း ကနေပြီး အခု မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလင် သန်း၆၀လောက်ဖြစ်သွားတာ ငါတို့ခုမြန်မာလူနည်းစုတွေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
ရှေးခေတ် ၂၀×× ခုနှစ် က မြန်မာတွေ သောက်တလွဲလုပ်ခဲ့တာကိုး " လို့ မချိတင်ကဲ မြည်တမ်းနေမှာ ကို ကာကွယ်ပေးကြပါ။
အခု မွတ်ဆလင်တွေဟာ လည်း နောင်မွတ်ဆလင်မျိုးဆက် အကျိုးအတွက် ရေရှည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောင်မွတ်ဆလင် မျိုးဆက် ၁၀သန်းလောက် ထားခဲ့ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြချိန်မှာ
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက လည်း ( နောင်မြန်မာသားမြေး မျိုးဆက်များအတွက်) ရေရှည် အနာဂတ်အတွက် အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ကြပါ။
မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုး တစ်ဆူတည်ခွင့်ပြုမှ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဗလီတစ်လုံးပေးဆောက်တဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါ။
မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ က မက်ကာနဲ့ မက်ဒီနာ မြို့တွေ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုး တွေ ထောင်နဲ့ချီ တည်ထားခွင့် ရပြီးမှ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ချီပေးဆောက်ပါ။
အူလည်လည် မစဉ်းစားပါနဲ့။ မျှမျှတတ ပေါ့။ :)
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်ရင် အောက် က link မှာ သွားရောက် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
[ ဆောင်းပါးများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုပါက....
အစွန်းရောက် မူဆလင်ဆိုတာ၊ အလယ်အလတ် မူဆလင်ဆိုတာ
အစ္စလာမ်ဂျီဟဒ် ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲ၊ ဘယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းမှာလဲ၊ အစ္စလာမ်မစ်နယ်မြေတွေ ပေးလိုက်ရင်ကောငြိမ်းချမ်းမှာလား။
အစ္စလာမ် ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာ
ရခိုင်သွေးချင်းကို ကာကွယ်ပါ။ မြန်မာလည်းရခိုင်၊ ရခိုင်လည်းမြန်မာ၊ တို့သွေးချင်းထဲမှာ မူဆလင်မပါ။
အစ္စလာမ် သည် ငြိမ်းချမ်းသော ဘာသာ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လား ဘယ်အချိန်မှာ ဆွေးနွေးကြမလဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးသော ခံတပ်တွေကို အဆုံးစွန်ကာကွယ်ပါ
ဆော်ဒီတွင် မည်သည့်ဘာသာမှ သာသာနာပြုခွင့်မရှိခြင်း
Posted by Wai Lin Aung at 12:16 PM No comments:
MAKE MONEY: ဦးခင်ရွှေ ၏ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်
MAKE MONEY: ဦးခင်ရွှေ ၏ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်: အန်ကယ်သိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အစိုးရကသိမ်းတာပါ။ အစိုးရလူကြီးမင်းထဲမှာ တော့ အန်ကယ် ခမည်းခမက်ကြီးက ပါတ...
Posted by Wai Lin Aung at 12:38 AM No comments:
MAKE MONEY: ဒီမို မေမေသို့
MAKE MONEY: ဒီမို မေမေသို့: အမေသို့ ပြစ်မူမထင်ရှား သရွေ့ အပြစ်မဲ့ တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ ပြစ်မူထင်ရှားပြီး ပြစ်ဒဏ် မခံ ရသေးတာတွေကို လည်း တာဝန်ယူ ဖမ်းဆီးပေးနို...
Posted by Wai Lin Aung at 12:23 AM No comments:
MAKE MONEY: လွှတ်တော် အမတ် ခင်ရွှေ ၏ ကျဆုံးခန်း
MAKE MONEY: လွှတ်တော် အမတ် ခင်ရွှေ ၏ ကျဆုံးခန်း: ခရို နီ ဦးခင်ရွှေကို ထွက်ပေါက်ပေးထားသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည် ။ လယ်သိမ်းခံ တောင်သူကြီးများ၏ နစ်နာချက်ကို ကုစားပေးရန် ၊ အရင်းသေ လှုပ်ရှာ...
Posted by Wai Lin Aung at 6:52 PM No comments:
I am Aung Lin Wai. Some of my friend called me Wai lin Aung. My family called me Aung wai Lin. Nobody knows who I am, what i am. I really say myself Lin Aung Wai. Actually My name is Lin Wai Aung. But you can call me as Wai aung Lin.
အစွန်းရောက်မူဆလင်၊ အစွန်းမရောက်တရောက် မူဆလင်၊ အ...